महन्थ ठाकुरको अध्यक्ष पद चैट, अन्य १६ नेतामाथि भयो यस्तो कारवाही — Imandarmedia.com
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले जसपाले पठाएको नयाँ कार्यकारिणी समितिको विवरण अध्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति थियो, अब ३५ सदस्यीय भएको छ’ उनले भने ।
कार्यकारिणी समितिबाट हटाइएका १६ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट भने हटाइएको छैन । एक नेता भन्छन्, ‘अब हामीले कारबाही गर्‍यौं वा उहाँहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत नपुर्‍याई नयाँ दल दर्ता गर्नुभयो भने सांसद पद जाला । अहिलेहरुलाई यसमा केही गरिएको छैन ।
यसै गरि : केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले भने– हामीसँग सिंगौरी खेल्न आए सिङ्ग भाँचिनेछ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । सोमबारदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने बताए ।
उनले आफूहरुले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने दोहोर्याउँदै सडक र सदनमा सशक्त र प्रभावकारी खेल्ने र सत्तारुढ सिंगौरी खेल्न आए सिँग भाँचिने चेतावनी दिए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले धरहरा, रानीपोखरी बनाउनेदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौंसम्मै ल्याएको भन्दै ओलीले त्यो पनि भत्काउन सरकारलाई चेतावनी दिए ।
भत्काइदेउ धरहरा, टालिदेउ मेलम्ची, भत्काइदेउ सडक पुल र विमानस्थलहरु ओली याद आउने सबै चिजहरू’ उनको भनाइ थियो । अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारले एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको पनि उनले टिप्पणी गरे।
एमाले बैठकमा ओलीलाई थर्काएपछि वामदेव घरतिर हिँडे, स्थायी कमिटीमा वामदेवले भने– गाली गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षलाई दिऊँ !
नेकपा एमालेको विधान पारित गर्न सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सबै नेताहरूलाई स्तब्ध बनाए । स्थायी समितिको बैठकमा केपी ओलीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका गौतम अपराह्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी नै नभई घरतिर लागेका हुन् ।
ओलीलाई वामदेवको कटाक्ष
केन्द्रीय समिति बैठकअघि ललितपुरस्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानको भवनमै एमालेको स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । त्यस क्रममा बैठकमा पेस भएको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बोल्ने पालो आयो । त्यस क्रममा गौतमले व्यङ्ग्यात्मक प्रस्ताव अघि सारे ।
धारणा राख्ने क्रममा उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्तुति केही समयअघि अध्यक्ष ओलीले दिएका अभिव्यक्तिप्रति लक्षित थियो । गौतमले आफ्नो धारणा राख्दै यसबीच पार्टी अध्यक्षले मनपरी गरेका विषयलाई उठाएका थिए ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा ‘अध्यक्षका यी अधिकारहरू’ भन्ने शीर्षकमा केही अधिकार थप्नुपर्ने कुरा गौतमले उठाए । त्यसमा उनले ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ’ र ‘पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही’ शीर्षकअन्तरगत पनि केही बुँदाहरु थप्नुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।
‘पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ’ यो प्रस्ताव पनि थपौँ गौतमले भनेका थिए ।
गौतमले के सन्दर्भमा यो विषय उठाए भने कम्युनिस्ट पार्टीमा माथि उल्लेख भएका विषयहरू कुनै पनि देशका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका विधानमा उल्लेख हुँदैनन् र आरोप पनि लगाइँदैन ।
‘अहिले नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भएका राजनीतिक मतभिन्नताका सन्दर्भमा अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाललाई अपराधी भन्नुभयो, गद्दार र देशद्रोही पनि भन्नुभयो । अध्यक्षले त्यस्तो भन्न पाइन्छ भने विधानमा व्यवस्था गर्नुप–यो’, गौतमले बैठकमा भने, ‘बोल्नुहुँदैन भने किन बोल्नुभयो ? यस्तो मनपरी गर्न पाइँदैन ।
गौतमले पार्टीमा कसैले गल्ती ग–यो भने राजनीतिक कारबाही हुने भन्दै अध्यक्षले नै गल्ती गर्दा कारवाही हुने कि नहुने भन्दै थप प्रश्न गरेका थिए । वामदेवले यस्तो धारणा राख्दा स्थायी कमिटी बैठकस्थल सन्नाटा छाएको थियो ।स्थायी कमिटीमै खटपट परेपछि गौतम केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी नभई घरतिर लागेको एक नेताले जानकारी दिए ।